Indlela yokwenza amasango ngokuhambisa drive kagesi? Step by step ukufakwa nezithombe
Yenza noma ngokuhambisa amasango drive kagesi kungenzeka ngokuzimela. Nokho, le nqubo akakwazi ngokuthi elula, idinga i-okuthile azani namakhono.
othomathikhi izici ukufakwa
Kuphethe msebenzi wenziwa at esigabeni sokugcina, uma ukhetho Kusolwa isakhiwo. Ukuhambisa iqabunga esangweni luzoqala ngokusebenzisa Racks, basuke ithengwa imitha ne uhlelo lokubopha. Reiki eqondiswa iphrofayli yenethiwekhi. Uma ukhetha ukufaka ngokuhambisa esangweni ngikwazi ukuqala, kumelwe kukhunjulwe ukuthi ngaphezu Racks kudingeka ukulawula, kagesi, inkinobho, kanye ukukhanya-beacon. Konke azosethwa ngokuhambisana nezidingo ebekiwe imiyalelo.
Ekuqaleni, udinga ukuthola indawo ukufakwa kagesi. Kuyodingeka ukufaka isizinda, elisesifundeni isethi. On futhi idrayivu itholakala. Ngemva uhlelo kumele zigxile isiteshi phakathi namakalishi.
Lapho ukufakwa ngokuhambisa iminyango drive kagesi, isinyathelo esilandelayo ukulungisa kulungiselelwa othomathikhi bokusebenzisa isikhundla salo ukuze kutholakale indawo idrayivu. Amandla kumele itholakale kwi wesitimela ngamazinyo, kubalulekile ukuthi lezi zinto yizona abahlala engxenyeni ephakathi ye-gear kanye eqondiswa tube iphrofayli esikhundleni uzimele ilungiselelo yangaphandle.
Uma indawo kunqunywa, kubalulekile ukubeka lonke imishini ukufakwa, bese nihamba azungezwe ngu Welding. Kwezinye izimo, kunesidingo ukushayela kuyanda ngamasentimitha ambalwa ephakeme. Ngenxa yalesi ukusetshenziswa profiled tube, okuyinto ashiselwe kuya actuator. Lapho ipayipi Ukhetha uholwe izinhlangothi ezilandelayo: 40 x 20, 50 x 50, 60 x 30. Njengoba nje isiteshi ogibele base obandayo, ukuze kuzolungiswa nalokho nge Welding apharathasi drive kagesi, futhi ngemva fix usebenzisa imishudo.
Sebenza omncane bahlala endaweni yokubeka
Yebo, ungakwazi oda umnyango beya nge kagesi kuyithuba-ikhi ngayinye. Nokho, izindleko zale misebenzi kuyoba ngempela eliphezulu. Ngokuzimela afeze manipulations enjalo, nakuba ngisho simple, kodwa kusengenzeka. In the isinyathelo esilandelayo kufanele kube ukuba banakekele ukulungisa yokubeka. Isango ngaleyo ndlela kufanele livulwe phakathi idrayivu kufanele isungulwe ne yokubeka igiya. Ukuze ulungise inkinobho umkhawulo kubalulekile ukushiya yokubeka kancane ngamazinyo. Lesi sakamuva kuyodingeka ashiselwe ukuze iphrofayli tube. Ukuze wesitimela kufanele udwebe kuwebhu. Uma endaweni kuyoba yokubeka esilandelayo, enze inqubo elanikezelwa kuchaziwe ngenhla. Phakathi emalungeni akufanele izikhala. Ngalinye timphawu yasibamba esangweni ezishintshayo futhi kufanele ashiselwe futhi. Phakathi idrayivu kanye igiya ukuze lishiywe mm igebe.
umkhawulo sekuqalile ukufakwa ubuchwepheshe
Uma ufaka kagesi esangweni beya, kubalulekile ukuba ulungise umkhawulo inkinobho ngezikulufo, wabahlukanisa phezu wesitimela sekupheleni. Ishintsha ungaba design kazibuthe noma mechanical. Inketho yokuqala uzobe kwabangela ngisho okushisa aphansi. On the yokubeka Faka uzibuthe ngesikhathi ukudlula endaweni ethile eyeka ukwakhiwa. Ishintsha kufanele ihlukaniswe sokunene nesobunxele. Ochwepheshe batusa ukulungiselelwa ukufakwa ukushintsha kazibuthe, wahlukana nabo, imitha elilodwa noma ngaphezulu. Ukufakwa mechanical umkhawulo ukushintsha ilula ngokwanele. Basebenza ngesisekelo entwasahlobo.
Ilungiselela ukufaka esangweni
Uma ukhetha ukufaka ngokuhambisa iminyango drive kagesi, ekuqaleni uzodinga uthele isisekelo, lokhu esigabeni wokulungiselela. imisebenzi efanayo kufanele uqale ngomakha indawo emseleni. Ububanzi esangweni base ungakwazi ukukwenza kufanele kulingane kumkhawulo ngamasentimitha 50. Ukunquma womthombo ukujula, kubalulekile ukuba acabangele emgqeni inhlabathi okokuqandisa. Uma kuziwa edolobheni, isisekelo kungenziwa wabeka 1.7 amamitha.
Amasango kuyinenge Amandla zingenziwa ngezandla zakho. Nokufaka nesiteshi iyoba zokwakha pad. Imininingwane nomunye ajoyinwa Welding. Isiteshi isetshenziswa ukwandisa ngezizathu ukuqina kanye namandla. Uma ukuxhuma mpo Amabha Jumpers, uthola ngempela lwamathambo eqinile. It is ngihlaliswa emseleni, bese uthele isisekelo. Oku kufanele bagcwalise isihlabathi phansi okuyinto ohlangene kahle.
Kuyodingeka hlola valve elise nendawo phambi ethela isisekelo kunesidingo. Ukuze wenze lokhu, sebenzisa ezingeni isakhiwo. Inqubo ukuqondanisa kuyadingeka ukuze ubone ukuthi longitudinal sill-eksisi parallel emgqeni kocingo. Uma uhlela kudivayisi ngokuhambisa esangweni ngikwazi ukuqala, khona-ke kuyoba ethela isisekelo kudingekile ukuba abeke izintambo, engcwaba nabo ngamapayipi lukathayela. Phuma iphuzu isixha izintambo ukuze kukhethwe, ucabangela indawo kuhlelwe we actuator. Ngokuvamile imishini efakwe maphakathi isisekelo.
design line ukunyakaza ukuba kunqunywa intambo ahlukaniswe kanye nokuvulwa, kufanele ibekwe, wahlukana komzila womgwaqo amamilimitha angu-200. Ezintanjeni izokwenza ugongolo, okuyinto uba iphrofayela yenethiwekhi. Uzodinga ukulungiselela ukufaka ukuthutha roller, obandayo nabo uchungechunge ngaphakathi ugongolo yenethiwekhi. Izinqola Ezinombhobho kumele elivulela ngumgogodla esangweni. Songa kudingeka sigqoke le steel isiteshi base ezakhiwe, bese ukubeka ukusekelwa zilandelana ezindaweni ezahlukene.
Ukubeka roller namakalishi
Kangakanani ukuxhumana kagesi esangweni beya, oluchazwe ngenhla. Nokho, isinyathelo esilandelayo ukusebenzisa ukulungisa roller namakalishi. endaweni Ukulungisa kufanele ashiselwe u. Amasango seluqaliwe kuzo kuvulwa kuze kube sekupheleni elikuvumela ukuba uhlole horizontality we ngendwangu. Ukulungisa ebaleni lokudlala sokudonsa Welding. Indwangu kufanele asuswe amabombo roller, okuyinto ekhishwe ne pads ukulungiswa. Ngokwe wesifunda kuyodingeka ukuba ibhekane Welding, endaweni ashiselwe ukuba ilungu efanelekayo. Casters kumele ikhiyiwe kusayithi ukulungiswa. Isango kufanele isethwe ku isikhundla avaliwe, siyivumele ukuba ulungise ovundlile isikhundla isihlobo ukuba iphrofayli yenethiwekhi. Ukuze wenze lokhu, sebenzisa sesipanela ukuze kudingeka uyekethise noma ziphakamise isihlobo platform komunye nomunye.
Mahhala Wheeling ukulungiswa
Nut engenhla kumele uyokhululwa ukuze ulungise indawo amabombo roller. Isango kumele livulwe futhi uvaliwe, wabakhukhula kusukela komunye umkhawulo kuya komunye. ngaleyo ndlela casters anesikhundla lesifanele lapho ukwakhiwa izoya ngokukhululekile futhi kalula. Ngemva kokulungiswa iphelile, qinisa nuts phezulu roller amabombo.
Ukufaka plugs kanye roller ekupheleni
Kanjani ukufeza ukufakwa kagesi esangweni ngokuhambisa, uyazi, uma ufunda ulwazi elinikezwe ngenhla. Nokho, kubalulekile ukwazi futhi ukuthi ufaka ukuphela Ukugunda. In the isinyathelo esilandelayo ungathatha kwalowo umzamo. Ngenxa yale njongo, ngaphakathi iphrofayli ezimise U-we roller ekupheleni kumele ifakwe uyibeka ohlangothini front kwaba sesikhaleni sesango. Kuyoba lula ukulungisa imininingwane yasibamba imishudo. Kufaka amasango ngokuhambisa kufanele kube iphrofayela ipulaki yenethiwekhi, it is eziphothene kuze kube sohlangothini labaqaphi elingemuva. Le mininingwane ayivumeli iphrofayli ethwele ugcwale iqhwa, okwenza kungabi nokwenzeka wenza umcimbi amadivaysi.
Ukuze ukukhweza elingenhla Umhlahlandlela ingalo, athambise Ukugunda lokubopha. Ngemva ubakaki kufanele ibekwe phezu kuwebhu ukuze ezinamasondo iphethelo engenhla izimbobo ohlangothini kumele buqondene ukwesekwa.
Sebenzisa design bekhululeke kakhudlwana ukuvumela idrayivu. Beya iminyango, ukufakwa lapho kungenziwa ngokwakho, isinyathelo esilandelayo kuhilela ulwelwesi Indwangu ishidi profiled. Ekuqaleni impahla uzodinga ukuphuma ububanzi nobude, enikeza ngendwangu oyifunayo ngosayizi.
Waybill yokuvala emnyango sokhuni: idivayisi iphinde ukulungisa
Welding Mask "Resanta MS 4": Izibuyekezo
Convector Ukushisa Electric: ukubuyekezwa, ezihlukahlukene futhi isimiso ukusebenza
Inkinobho Lesisemkhatsini: wiring idayagramu, izici ukufakwa. Legrand sekuqalile
Indle ukudonsa siteshi: isimiso umsebenzi nezeluleko okukhetha. Ukukhweza indle ukudonsa esiteshini
Ihhotela "Zvenigorod" e Zvenigorod: Izibuyekezo ifoni
Izinkinga zangempela zomthetho: ukungavinjelwa kokujeziswa, izibalo zobugebengu kanye nezinyathelo zomthelela wezomthetho
Ibsen Genrik: Biography, lokusungula, izingcaphuno
Le ndawo yase-USSR. Republic, labantu edolobheni
Umuthi 'uMbusi Imfihlo ": ukubuyekezwa odokotela, imiyalelo kanye nezithombe
Kuyini ukuqhathaniswa ezincwadini, izinhlobo zalo nezibonelo zokusetshenziswa
Imvunulo ubuhle izingane kaNcibijane sika Oriental: incazelo, iphethini kanye nezincomo
Uyini umkhondo wama doll "Bon Bon" empilweni yentombazane?
Catching walleye ekwindla muhle ikakhulukazi ngo-Okthoba
Astra: legend of imbali. Kunezinganekwane eziningi ngokuphathelene imibala